Umaka: ukutholwa kwethoni | Martech Zone
Umaka: ukutholwa kwethoni
The Best Grammar Checker for Blogs, Email, Mobile and Social Media
NgoLwesine, ngo-Okthoba 8, 2020 NgeSonto, ngoMashi 7, 2021 Douglas Karr
Uma uke waba ngumfundi we Martech Zone isikhashana, uyazi ukuthi ngingalusebenzisa impela usizo oluthile emnyangweni wokuhlela. Akukhona ukuthi anginandaba nokupela kanye nohlelo lolimi, ngiyakwenza. Inkinga ingeyokujwayelekile. Sekuyiminyaka, ngibhala futhi ngishicilela izindatshana zethu endizeni. Abahambi ngezinyathelo eziningi zokuvunywa - bayacwaningwa, babhalwe, futhi bashicilelwe. Ngeshwa, lokho kungibangele